Out Bound TourPage | KMA Travels & Tours
Home / Out Bound TourPage
Out Bound TourPage
KMA Travels & Tours မှ ခရီးသွားအုပ်စုခေါင်းဆောင်နှင့် တွေ့ဆုံ၍ Nok Air (သို့မဟုတ်) Thai Lion Air လေကြောင်း ခရီးစဉ်ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့သို့ ပျံသန်းထွက်ခွာကြပါမည်။
ဗီယက်နမ် - ဟနွိုင်း - ဟာလောင်း
KMA Travels & Tours မှ ခရီးသွားအုပ်စုခေါင်းဆောင်နှင့် တွေ့ဆုံ၍ Nok Air (သို့မဟုတ်) Thai Lion Air လေကြောင်း ခရီးစဉ်ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့သို့ ပျံသန်းထွက်ခွာကြပါမည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပါက လေဆိပ်တွင် ဒေသဆိုင်ရာ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆို နှုတ်ဆက်၍ ပတ္တရားမြို့သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာကြပါမည်။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် Terminal 1 မှ ခရီးသွားအုပ်စုခေါင်းဆောင်နှင့်အတူ Vietnam Airline လေကြောင်းခရီးစဉ်ဖြင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ နွိုင်ဘေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ပျံသန်းရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိပါက ဒေသဆိုင်ရာဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်၍ ဟိုတယ်သို့ပို့ဆောင်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ Read Me
Myeik (Mergui) Archipelago; 189 km air south of Dawei and it is located in southernmost point of Myanmar; comprises of 800 gorgeous islands which are densely forested tropical islands and engulfed inaluxuriant emerald sea 1000 square miles, these Pristine Inlands are totally untouched by modern development. You can go there from Kawthaung. It would be one of the attractions to visit. Read Me